Sary Anosy : miteny ho azy ny sary, 18 may 11 – MyDago.com aime Madagascar
Sary Anosy : miteny ho azy ny sary, 18 may 11
Sary tsy an-kiteniteny 13 mey 11
Sary magro 14 mey 11
Sary 07 mai 11
21 pensées sur “Sary Anosy : miteny ho azy ny sary, 18 may 11”
Mparany Rakotondramasy dit :
Efa maromaro tsy voaisan’ny rantsan-taona ny évènements fidinana an-dalambe toy izao nandraisako anjara, indrindra indrindra fa nandritra ny fotoana nianarana teny Ankatso. Be zay sorona efa natao zay fa tsy mbola nisy fiovana tsara naterany hatramin’izao. Miafara amin’ny fifandratrana sy fifamonoana foana ny tantaran’ny fitondram-panjakana teto amin’ny tanàna. Hiverina indray ve zany ny famonoana vahoaka mba hakan’ireo « mpitari-tolona » toerana? dia hisy tetezamita vaovao hanjakan’ny dinosaures sy ny pions vaovao apetrany? dia hisy palitao maromaro hivadibadika? dia hisy fidinana an-dalambe vaovao? dia…
19 mai 2011 à 11 h 33 min
@Solo Razafy !
Tena milay ! misaotra betsaka indrindra e!
Ny mampalahelo ao amin’ny tanàna dia tahak’izao.
Raha natao hono ny radiographie mammaire an’ilay ramatoa, dia hita ny fisian’ny tumeur cancéreuse izay mbola azo tsaboina !
Mba hitsabo hono, dia ny tanana sy tongotra no notapatapahina, na koa ny kibo no nodidididiana, fa tsy ilay tratra na nonon’ilay olona no notsaboina arak’izay tokony natao !!!
Raha mbola tahak’izao foana ny fandehan’ny tolona, dia ho herim-po very maina !!
Izao ilay domelina, efa tafiditra ao amin’ny secteur pétrolier, izay tena anto-dihany tany Angola !!
Ny mpitolona variana « misangy » amin’i risara baomba !!
Rahoviana vao hanàja ny Lalàna rehetra, indrindra ny Lalam-panorenana ny malagasy, indrindra ireo mpahay lalàna rehetra ???
Dia inona ary hoy ianao izany no tokony atao e? Inona ilay vahaolona?
Ekena ary marina ilay lazainao momba ireo dinosaures sy mpitady seza. Nef ireo aloha izao no hitan’ny olona hoe mitolona ary miady. Fa isika, aiza? Raha tsy hiteny fotsiny afa-tsy ny tsaho mandeha eny ambony latabatra sy eny an-dàlan-tsara.
Ny olantsika dia izao izao : samy nitolona daholo isika ary samy nidina an-dàlam-be fa rehefa vita izay dia navelantsika ho entin’ireo lazainao fa dinosaures ireo daholo ny zavatra rehetra.
Dia averiko indray hoe inona ary no tokony atao?
19 mai 2011 à 12 h 46 min
Misaotra an’i Mydago fa hoatran’ny nanatrika mivantana ny tolona. Fa indrindra mankasitraka, mankatelina anareo mpitolona mahery fo, sahy misedra ny mafy hanafaka antsika amin’ity geja hila hahafaty ity.
Misaotra ihany koa ny Président Zafy Albert, nahatonga ny vahoaka ho vory lanona toy izao.
Mankahery lalandava mba ho tohizina ny tolona fa tsy hitsahatra antenantenany na eo aza ny ataon’ireto hery mpamoretana. Afa-baraka tsara izy ireo fa tsy mahazaka demokrasia !!
Raha mba ny hevitro manokana aloha dia izao :
– Tanterahina hatramin’ny Fialàn’i TGV aloha ny RODOBE,
ary izany, na iza na iza mitarika ny RODOBE !
Ny olana avy eo, tsy iray ihany fa maro satria fahamehana daholo ny fianinam-pirenena manontolo : Social – economie -politique – armée………….ets !
Ny maika tena maika aloha izao dia ny MANJERA AN’I TGV sy ny forongony !
Fa dia araraotina ihany kosa, mandritry ny Rodobe ny MITAKY ny fodian’i Dada, tsy misy fepetra ary ny filtsahany amin’ny Fifidianana ho Prezida !
manaraka ho azy ny sisa rehetra : ny mena sofina, sy ny sisa , ….
19 mai 2011 à 12 h 59 min
Fomba iray azo atao ny manomana fifidianana madio, io vola lany hamoriana vahoaka mandava-taona io dia azo ampiasaina tsara hanakaramana mpanara-maso fifidianana eny ifotony. Ataovy kajy sy sandao ange hoe ohatrinona ny vola lany hatramin’ny 2009 ka hatramin’izao tamin’ny organisations fivoriam-bahoaka e (sono, taxi-brousse, banderoles, indemnités sns…)dia ampio ireo famatsiana izay mety ho azo avy any ivelany. Dia avadiho fitaovana (moto, fiara) sy indemnités ho an’ny mpanara-maso sy mpitatitra voka-pifidianana dia ho foana na hihena fara-faharatsiny ireo voka-pifidianana miova eny an-dalana.
Fa na ahoana na ahoana dia tsy vahaolana ny mitarika vahoaka ho faty sy haratra toy ny tamin’ny 10 août 1991 sy tamin’ny 7 février 2009.
raha ny fomban’ny foza no entina hanjera foza dia laza foza daholo ny firenena manontolo
Amiko tsy any amin’ny fifidianana no olana. Efa nisy fifidianana talohan’ny 2009, fa rehefa tsy hajaina ny valim-pifidianana, na iza na iza nomena andraikitra sy naka handraikitra handrindra izany mba ho tsara sy azo ekena, dia tsy misy raharaha ho vanona eto fa hifanongana lava.
Dia raha mbola ekana indray aza hoe aleo hazera amin’ny alàlan’ny fifidianana ireo olona ireo dia jereo raha misy olona hafa avelany handray anjara amin’ny fifidianana. Izany hoe na ny safidinao aza dia efa gejainy.
Ny ain’olona ho afoy dia hisy foana. Ary rehefa tsy afoy amin’ny tolona toa izao izy ireny dia afoy noho ny fahantrana vokatry ny hadalana sy tsy fahampiam-pahalalana ataony sy ny mpitondra azy.
Mpanongam-panjakàna ve, dia azo hianteherana amin’izany fikarakaràna « fifidianana madio » izany ? iza no hitantana an’izany fifidianana izany ?
Toa lasa resaka aller-retour ilay izy amin’ny farany !!!
Ny tsy « fihetsehana » amin’izao fotoana izao, dia fankatoavana an-kitsirano an’ireo mpanongam-panjakàna ireo ! Tsy izy ireo mihintsy no hitondra soa hoan’ny vahoaka malagasy, fa na ny vahiny aza dia mahatsikaritra an’izany !
Atao ny fiala-nenina rehetra !
Rehefa rombo no vahaolana farany, dia aoka samy hifampitady ao !!! Ny Prezida Ravalomanana tsy tia rà mandriaka, aoka izy tsy hiditra amin’izany !!
Ireo mpiray tanindrazana tsy mihetsika, dia mbola anisan’ireo manaika andevozin’ny sasany ara-tsaina ary koa ara nofo !!!
19 mai 2011 à 13 h 27 min
Araky ny voalazan’i Alidera, tsy ny basy sy ny klimozen’i risara ihany no mahafaty, fa eo ny vokatry ny fahantràna, dia ny sakafo hoanina tsy misy sy ny aretina rehetra haterak’izany ! Ny vono olona niaran’ny sedrasedra, voaendaka sy voaroba tsy lazaina intsony !!
Mba jereo sy vakio ny zavatra avaokan’ny gazety isan’andro ! Tsy fahita na tamin’ny andron’i deba, izay nolazaina fa fanjakan’i baroa !
ianao zany mahafoy ny ainao sa ny ain’ny hafa no avelanao ho faty amin’ny fidinana an-dalambe? raha mahafoy ianao dia mandehana eny anoloana indrindra amin’ny mpidina an-dalambe
matin’i Deba sy Zafy toy ny tamin’ny 10 août 91 raha vao io ady amin’ny miaraùila io no atao e
19 mai 2011 à 13 h 35 min
Dia toy izay ihany koa raha haka tahaka ny 7 février 2009: maty sy maratra toy ny nanaovan-dRavalo sy Rajoelina ny vahoaka. ireo mpitarika ireo ange ka mahay mifanaraka foana e. Jereo Raharinaivo voafidim-bahoaka mpitarika fahiny teo Ambohijatovo, aiza izy izao? aiza ny garanti fa ireo mpitarika rodobe ireo dia tsy hamadika palitao toa an’iny?
Fa angaha moa tsy maintsy omena seza ireo mpitari-tolona ireo? F’angaha tsy azo atao ny mieritreritra fa hoe azo takiana amin’izy ireo ny dikan’ny zavatra teneniny tahaka ny hoe tia tanindrazana? Fa angaha rehefa tia tanindrazana dia tsy maintsy mahazo seza?
Ny tsy fahaizantsika namakafaka ny zavatra toa izany no nahatonga ny fitondran-dRavalomanana nianjera satria isika nanaiky norebireben’ireo tsy nahazo seza. Manana ohatra iray mazava tsara isika amin’izany : jereo Itpkl Joseph Ravoahangy Andrianavalona, inona moa no seza nalainy nony injay isika nahaleo tena?
Ny hadalantsika dia ny tsy nanomezana lanjany ny ain’olona efa nafoy hatrizay. Mpanao politika nanao sesi-tany ny tenany no nilaza izao zavatra izao tamin’ny 2003 tany, hoy indrindra izy hoe : dia ny zanak’iza indray no hovonoina amin’ny manaraka? Tsy efa filazana ve izany hoe vonona mihitsy ry zareo ny hamono olona hakany an’io fitondrana io? Fa ny tsy fahaizana itandrina hoy aho dia nilatsaka tao amin’ny fandrika napetrany.
Mahafoy ny aiko ve aho? Ataovy mazava ny làlan-komba dia ataovy ny velirano, ary asio lanjany sy satany ary hasiny ny zavatra atao rehetra dia mandeha ho azy izany. Hamonjy alika latsaka an-kady aza atao…
« Dia toy izany koa raha haka tahaka ny 7 février 2009 ; maty sy maratra toy ny nanaovan-dRavalo sy Rajoelina ny vahoaka » !!
Fa inona no hidiran’i Ravalomanana tamin’izay zava-niseho tamin’ny 7 février 2009 ? Angaha mbola tsy mazava ihany ? Tsy dia mety laotra ilay discours, ary tsy mahagaga rahatoa ka tsy tian’ny sasany hidina eny an-dalambe ny vahoaka tena vahoaka.
Tsy voatery haka tahaka ny foza rehefa manao manifestation ! Ny mpanao ratsy ihany no mahana !!!
Mba misy manao toy ny nataon’ny foza ve ireo mpanao manif eran-tany ??
Ho an’izay mbola tsy mino, dia jereo ny film-n’i Jean-Claude Van Damme hoe Ultime menace na Second in command ( titre original ) ; nivaoka tamin’ny 2006 io film io, ary io no nalaina tahaka mba hanasoketàna ny Preziza Ravalomanana. Izay nahita an’io film io, dia afaka hilaza fa betsaka ny zavatra nataon’ny mpanongana nalaina tahaka tamin’izy io.
– Filaharana mandeha eo anoloan’ny palais présidentiel
– Fitofirana nataon’ny complice avy ao anatin’ny palais ka nitarika rotaka (pretexte)
– Fihidirana an-tsehatra compagnie-n’na miaramila sandoka, nitondra blindés sy karazany …….
20 mai 2011 à 8 h 06 min
Dia ahoana indray ty miantso an’i Monja Roindefo hitondra tetezamita vaovao ity? fa tsy io ve no tena sefon’ny foza teny @ 13 mai e? sady tsy mba hoe nametra-pialàna fa najanona dia hamadika palitao dia ho arahina? mampalahelo ireo voagadra sy naratra raha izany sahady no miandry azy!
20 mai 2011 à 8 h 17 min
Mbola averiko indray mandeha fa mahay mifanaraka ireo mpitarika ireo, Ratsiraka nataon-dRavalomanana sesitany aza ity manjary namany mpiara-pitolona ao anaty 3 mouvances, izany no atao hoe pacte avec le diable. Dia rehefa hiongana araka ny fitakiana i Rajoelina dia ho lasa mpiara-mitolona ao anaty 4 mouvances izy efa-mianaka.
I Jacob Zuma sy ny SADC aza ity efa mitady hamadika palitao raha tsy efa namadika mihitsy.
Fehiny: tsy azo ianteherana ny lazain’ny mpanao politika opportunistes ka aza manary fahasalamana na mandany aina hametraka azy ireo amin’ny toerany.
Angamba tsy dia tsara ampidirina eto izany resaka malama loha izany, indrindra raha tsy dia marina laotra !
Misy ny rehetra ao anatin’ny « panier de foza », tahak’izany koa ny miaramila !
Ho an’i Mparany Rakotondramasy indray,
Ny famerenana ny ara-dalàna aloha no tokony hiezahana, avy eo vao mijery an’izay tokony hitondra ny firenena ! Ny vahoaka eo haneho ny safidiny !
tena ilaina ny ara-dalàna fa tsy ny fanaovana sorona vahoaka alefa hifanandrina amin’ny miaramila ho faty sy haratra no làlana hahatongavana any. tsy ara-dalàna ny fandefasaana ny vahoaka ho eny amin’ny abattoir tahaka ny 10 août 1991 sy 7 février 2009. miaramila efa hita fa hamono ve dia mbola anatonana?
Précédent Article précédent : News de l’Assemblée ACP-UE
Suivant Article suivant : VIDEO, Ambiance Milay ANOSY, 18 may 11